Doorashada Faransiiska oo looga baqayo in ay si lama filaan ah ku guuleysato Le Pen: – Voice of Somalis In Exile
(WAR) Sabti 16/04/2022-France- Doorashooyinka Faransiiska oo ay ilaa iyo iminka aftida la qaaday aad isugu dhow yihiin, labada musharax ee kala ah, madaxweynaha hadda talada haya ee Emmanuel Macron, iyo haweeneeyda ka tirsan xisbiga dhanka midig u janjeera, ee Mariana Le Pen ayaa laga cabsi qabaa in ay si lama filaan ah kaga guuleysato.
Tdobaad ka hor uun beey ahayd, markii uu Macron laba dhibcood uun dheeraa Le Pen, hase yeeshee waxaa jira in boqolkiiba 16 dadka reer Farance aneey weli go’aansan cidda ay u codeynayaan, taasaana laga yaabaa in ay Le Pen kor u soo qaado, haddii dadkaasi go’aasadaan in eey Le Pen siiyaan codadkooda.
Emmanuel Macron waxaa kale oo werwer ku haya, musharaxa saddexaad ee la tartamaya Jean-Luc Mélenchon, oo wareega ugu dambeeya, haddii natiijada uu helo u kala qeybiyo labada musharax ee kale, ay iyadana dhici karto in ay taasi guuldarro u xambaariso, Macron.
Dhanka kale dibad-baxyo waaweyn oo looga soo hor jeedo kooxaha dhanka Midig u janjeera in eey xukunka qabsadaan ayaa dalka gebbi ahaantiisba ka socda.
Doorashaan ayaa haddii ay Le Pen ku guuleysato, horseedi doona, arrimo badan oo ku daran dadka soo galootiga ah ee dalkaas iyo muslimiinta tirada badan ee Faransiiska.
Dadka Macron taageersan ayaa u badan dadweynaha dan yarta ah.
Sources: Franch 24 news